Izinkathi zonyaka (zokudla): amakheli, izithombe kanye nokubuyekeza
Moscow ozitika thina inani ezihlukahlukene zokudla nezindawo zokudla. Enhloko-dolobha, wonke umuntu angakwazi ukuthola ncamashi sikhungo, lapho ukudla emkhathini kuyoba okungaguquguquki kahle Ithanda. Ake bajwayelane omunye the best zokudlela, esemgwaqweni eningizimu-ntshonalanga ye-Moscow.
Okuncane izikhungo Seasons
Sitolo sekudla lokuphekiwe kule nethiwekhi basonta eliyifa adumile "Calypso", nesebenzela hhayi kuphela e Moscow kodwa futhi ezindaweni. Sekukonke, edolobheni ivuliwe kuze izikhungo ezimbili, enye yazo isendaweni Leninsky Prospekt. Itholakala Esitezi enkulu yezitolo nokuzijabulisa isikhungo "Rio", eduze I Noodle endlini abadumile yokudlela nakunethiwekhi cafe "Chocolate", "Barberry", "Burger King".
Indawo & Amahora
Okokuqala Seasons yokudlela eMoscow itholakala ngendlela yokuthi ungakwazi ukufinyelela ke kokubili ngemoto futhi umphakathi. Itholakala kuleli kheli elilandelayo :. Leninsky Prospect, 109. The yokudlela yesibili isendaweni Prospect Vernadskogo, 86A ..
Ngenxa inethiwekhi ezokuthutha athuthukile kule ngxenye inhlokodolobha, kungenzeka uthole yokudlela ngebhasi kusuka iziteshi kaMasipala eseduze ( "Vernadsky Prospekt", "Kaluga", "Southwest" futhi "Troparevo"). Imodi Indawo yokudlela ibhizinisi iyasiza: ngezinsuku zeviki kusuka 11 am kuya phakathi kwamabili, futhi ngezimpelasonto ivula ngo 12:00. A kwalokho nice yayizoba umculo bukhoma kusihlwa, ephelezelwa enkulu DJ-umenzi. Phakathi nempelasonto aphethwe ezihlukahlukene workshop evumelanisiwe futhi izifundo zobuciko izingane ukwazi.
Design and layout izindawo
Izinhlelo zokudla ungomunye izinkampani okuholela Megre Interiors, okuyinto bahlole izitayela yesimanje namaphakathi nezwe. Ukukhetha izinkomba ezimbili: isitayela Loft kanye zakudala - bahlanganisa kubo, futhi sinemihlahlandlela, design ethakazelisa kakhulu yokuqala.
Izinkathi zonyaka Indawo yokudlela, ku Leninsky Prospekt ingenye ngobukhulu, ihlanganisa indawo 1200 m 2. Ehholo elikhulu nge Chandeliers zikanokusho elenga ophahleni futhi anemibala segolide bazizwa emkhathini we ubunkimbinkimbi kanye kalula. Zonke kumathebula SOFAS benziwa ukukhanya umbala shades okufudumele nangezindlela ezikhanya ezincane. Le nhlanganisela ngobuhlakani izitayela ezimbili ezihlukene kudala isimo emangalisayo ethokomele alinikela izivakashi ingxoxo ngobuqotho. Ngokusho baxgeki kakhulu, okungcono endaweni angabhekwa sikhungo Izinkathi Zonyaka. Sitolo sekudla lokuphekiwe yalesi brand akuzona kuphela endaweni ekahle kodwa futhi design emangalisayo enhle.
Ngaphezu amafasitela omkhulu wezenzakalo zesikhathi esizayo esiwuthola uzokubonisa izindawo imigwaqo egqamile eMoscow, omunye ngokunenzuzo yokudlela ithala ehlobo. Kuyinto mikhulu futhi lizungezwe ezindimeni izimbali brilliant kunazo, obucayi elimnandi. Lapha zantambama ehlobo ukudlala umculo avulekile bukhoma, okuyinto kudala izimo ezikahle for kwakuwukubonana kwezithandani. Cabanga nje indlela enhle ukuhlala izihlalo ukhululekile amathebula ezihlotshiswe kahle futhi udle cuisine okudala omunye labapheki best of cuisine Italy. Yingenxa yalesi zikanokusho Veranda yokudlela Seasons e Lenin, ogama isithombe ubona, ingenye izikhungo avakashelwa yenhloko-dolobha.
Ake sithole ukuthi kwakungani yonke imininingwane mayelana izitsha tingafundziswa Izinkathi Zonyaka. lezi zokudlela babe izici zabo imenyu: ukulungiselela, ukubulawa, ukugeleza ngaphansi nososo ehlukahlukene kanye nezinye izingxenye ezincane, ngaphandle lapho isidlo ngeke ephelele.
Le ndoda main ekhishini - Yebo, umpheki! Ngalesi yokudlela chef ingenye labapheki abanamakhono kakhulu, master of izikebhe Stanislav bakhe ibhola. Isiqondiso eyinhloko izikhungo kubhekwe cuisine European, isiNtaliyane ikakhulukazi nesiFulentshi bendabuko. Izivakashi Umenyiwe imenyu nokuceba ezihlukahlukene kumbhali izitsha. Nazi nje uhlu encane yini ungakwazi ukujabulela kule ndawo enhle kangaka:
Lenten imenyu (salads kanye Ungadla kulabo ukudla);
Pizza (focaccia weparmesan "calzone" zakudala "Carbonara" "UMargarita" et al.);
Isobho (isobho, utamatisi kanye basil, minestrone);
izitsha ashisayo (linguine nge pesto, risotto nge isipinashi, Couscous nemifino njll);
zezingane imenyu (ukhilimu amasobho, pasta, kebabs, okuyigugu ukuthi zonke izingane ziyazithanda kakhulu);
cuisine yokudala (foie Gras kanye cherry ebabayo, usika izingcezu azidingayo ngokucophelela puree kanye isaladi ne wasabi, kwasolwandle);
ukudla Caucasian (khachapuri, dolma, sacivi neyogathi);
izitsha ashisayo (inkukhu ngamakhambi, kebab, ulwandle bass, bream kanye ingulube izimbambo).
Njengoba ubona, imenyu ngempela ezahlukene kakhulu, ngakho lapha njalo guest uzothola dish ukuthi uthande. Ngaphezu izitsha esihlwabusayo kakhulu, kule ndawo yokudlela inama yokubhaka ayo nge kuhhavini on umlilo evulekile! Izivakashi uphiwa elimnandi isinkwa esisanda kubhakwa ukuze nhlama ebilisiwe esingenamvubelo.
Kuwufanele kokusho amazwi ambalwa mayelana izindleko zokudla. Amanani kule ndawo yokudlela kancane ngenhla Ngokwesilinganiso, kodwa ukudla okuhle kakhulu futhi sevisi ngokuphelele kuwufanele imali wachitha. Ngokwesibonelo, izindleko eyodwa bakhonze isaladi kuyinto ruble 250 kuya 780, kodwa esihlwabusayo salmon Steak ngaphansi ezimhlophe iwayini Usoso kwasolwandle kuyodingeka bakhokhe ruble 850. Ukuze izivakashi abasebenzi njalo Seasons (zokudla Sekuyisikhathi eside nakwamanye amanethiwekhi wayekwenza umqondo ofanayo) elikhiphe ikhadi, lapho ungagcina isamba esikhulu.
Iziphuzo kanye nama-dessert
ngokukhethekile kufanele babe abacebile uhlu iwayini. Lunikeza izwe brand edume kakhulu uphuzo oludakayo: izinhlobonhlobo engcono iwayini Italian futhi French ne-brandy endala nogologo. Fans of iziphuzo ezishisayo angabona ukuthi uphuma njani yekhofi okumnandi, ukwenziwa kusukela okusanhlamvu fresh futhi zibe nephunga elimnandi. Yiqiniso, ngenxa eliphezulu yalesi siphuzo kufanele Shell out isamba lungisa, kodwa injabulo we ngokumangalisayo enkulu ashisayo-iziphuzo aqinisekisiwe!
Esinye sezici ezivelele yokudlela angabhekwa esitolo yayo ukudla, elinikeza Tinhlobo confectionery. Zonke izinhlobo cheesecakes, amakhekhe, Esterházy ka caramel mousse, ice cream, meringue kanye berry sorbets - bonke uzilungiselele kuphela kusuka imikhiqizo yemvelo ngenjongo zokupheka best, lapho umoya eliyingqayizivele futhi okumnandi.
Izindleko dessert Akumangalisi ezincane: isibonelo, khekhe "Melange" inkanuko izithelo Punch kubiza ruble 390, futhi omunye bakhonze amakhekhe ( "Honey pie", "Napoleon", "Tiramisu") kuphela izobiza ruble 250 450. Ukulungiselela amakhekhe-copyright oda - kungenye ibhonasi nice yezivakashi (le sevisi esinikezwa Seasons yokudlela Lenin).
Izibuyekezo kanye isivakashi isipiliyoni
Le ndawo ethandwa kakhulu hhayi kuphela entsheni kodwa futhi phakathi kwabantu abadala. Kulesi yokudlela nabangani noma osebenza nabo, endaweni ivulekile nje eyenzelwe izinkampani ezinkulu ezinomsindo. Kuyinto enhle izinsuku romantic, ngoba ingaphakathi yakhelwe, amathoni emnene efudumele kakhulu. Izingane abe ebaleni lokudlala ekhethekile izikhathi zonyaka. Sitolo sekudla lokuphekiwe, ukubuyekezwa zazo akhayo phakathi Muscovites, kukhona izindawo ezifanelekayo zokudlala imikhaya.
Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo eziningi izivakashi, yokudlela Seasons angabizwa ngokuthi isikhungo engcono eNingizimu-West wesifunda yenhloko-dolobha. Kuyinto inhlanganisela ephelele intengo Izinga lokudla kanye sevisi nje phezulu! Kwesokudla emnyango ekamelweni lezivakashi ihlangabezana hostesses futhi emomotheka ngobungane umema ozowela itafula, futhi oweta - ochwepheshe weqiniso, njalo ngokushesha, lokho dish okufanele uwukhethe nokuthi ukuwaphuza kungcono ukuhlanganisa. Kuwufanele okungenani kanye ukuza lapha ukuzizwa emkhathini Amazing we dolobha Chic futhi zikhanyise!
Sitolo sekudla lokuphekiwe Tambov: amakheli, amamenyu, ukubuyekezwa
Ihhotela Side Star Resort, Turkey